Jiro mikraoba UV
Boaty UV Sterilizer
Fanaraha-maso ny kalitaon'ny rivotra
Ny tombontsoa azo amin'ny famonoana UV-C
Ny tombontsoa azo avy amin'ny rafitra famonoana UV-C dia be dia be, ao anatin'izany: Mahomby amin'ny karazana zavamiaina bitika rehetra, ao anatin'izany ny bakteria, viriosy, holatra ary protozoa. sy tontolo iainana f ...
Azo antoka ve ny 222nm UV Light?
Misy halavan'ny halavany maro samihafa ao anatin'ny fiparitahan'ny UV malalaka, samy manana ny mety ho fampiharana azy sy ny mombamomba azy izy ireo. Ny halavan'ny halavan'ny halavany toa ny UVA sy UVB dia mety hampidi-doza amin'ny fahasalamanao, saingy azo antoka ny UVC 222nm ho an'ny habaka anatiny ...
Ny fahombiazan'ny fahazavana 222nm Ultraviolet amin'ny famoahana aretina amin'ny SARS-CoV-2
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-18
Ny fanadihadiana nataon'ny mpiara-mianatra navoaka tao amin'ny American Journal of Infection Control dia nanadihady ny fahombiazan'ny Far-UV 222 nm manohitra ny SARS-CoV-2 (ilay virus izay miteraka COVID-19) eny amin'ny habakabaka. Amin'ity fandinihana ity, ny fatra maotina Far-UV 222 nm an'ny 3 mJ / cm2 dia nahatonga fihenan'ny 99,7% amin'ny SARS-CoV-2 "azo iainana" ...
COVID-19 MIADY: MAMPIASA MAZAVA ULTRAVIOLET HANAMARIHANA NY SCANNERS CT
Ny scan CT dia zava-dehibe amin'ny fakana sary ny havokavoka ao anatin'izany ny COVID-19, fa ny famonoana otrikaina ny masinina eo anelanelan'ny fampiasana dia mandany fotoana. Ekipa mpikaroka iray no mety nahita vahaolana. Vanessa Wasta sy Sarah Tarney / Navoaka tamin'ny 8 Des ho fanamafisana ny fizotran'ny asa fitarafana ara-pahasalamana, mpikaroka ...
Ny karazan-jiro UV antsoina hoe Far-UVC dia azo antoka hampiasaina manodidina ny olona ary mamono olona> 99,9% amin'ny Coronavirus amin'ny Airborne: fianarana
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-04
25 Jona 2020 - Maherin'ny 99,9% ny coronavirus amin'ny vanim-potoana misy an'habakabaka no novonoina rehefa tratry ny hazavana halavan'ny ultraviolet manokana azo antoka ampiasaina amin'ny manodidina ny olombelona, ​​fikarohana iray natao tao amin'ny Columbia University Irving Medical Center no nahitana. “Miorina amin'ny valiny, ny ...
Afaka mamono ny Coronavirus Vaovao ve ny fahazavana UV?
Ny hazavana Ultraviolet (UV) dia karazana taratra. Manana angovo betsaka kokoa noho ny onja radio na hazavana hita maso izy nefa kely angovo noho ny taratra X na taratra gamma. Afaka miharihary amin'ny hazavan'ny UV ianao amin'ny alàlan'ny tara-pahazavana voajanahary na amin'ny alàlan'ny loharano namboarin'olombelona toy ny fandriana mandoko. Ny jiro UV dia nampiasaina hamonoana mikraoba toy ny ...
Inona ny teknolojia UV sy UV-C
Inona ny UV? Matetika izy io dia antsoina hoe 'hazavana' ultraviolet, fa UV kosa dia karazana taratra elektromagnetika misy halavan'ny halavany noho ny hazavana hita ary lava kokoa noho ny taratra X. Ny tara-pahazavana UV dia tafiditra amina sokajy telo arakaraka ny halavany: UVA, UVB ary UVC. Ny fohy kokoa ny halavan'ny halavany, ny mor ...
Ny oniversite Kobe sy Ushio dia manaporofo ny 222 nm lavitra ny taratra UV-C dia mampihena ny isan'ny bakteria ary tsy miteraka fahasimbana amin'ny hoditry ny olombelona
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-06
Ny taratra ultraviolet C (UVC) dia faritana ho halavan'ny onja 100 - 280 nm UV. UVC avy amin'ny masoandro UV dia tsy afaka mahatratra ny tany, satria ity faritra UV ity dia tototry ny sosona ozon. Ny jiro UVC germicidal mahazatra (halavan'ny 254nm) dia azo ampiasaina hamonoana toerana tsy misy olona toy ny ...
Inona ny UV-C mitondra ny herin'ny tara-pahazavana amin'ny masoandro
Inona ny UV-C mitondra ny herin'ny tara-pahazavana amin'ny masoandro Ny UV Spectrum UV-A, UV-B, ary UV-C dia ampahany amin'ny spektrum hazavana ultraviolet. UV-A dia miteraka fikolokoloana hoditra ary ampiasaina amin'ny fitsaboana hitsaboana aretin-koditra sasany. UV-B dia manana fahaizana miditra lalina sy ...
Jiro sy jiro UV: Taratra Ultraviolet-C, famonoana otrikaretina ary Coronavirus
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-04
Noho ny fihanaky ny aretina Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ankehitriny vokatry ny SARS-CoV-2 coronavirus vaovao, dia mety ho liana amin'ny fividianana jiro ultraviolet-C (UVC) ny mpanjifa mba hamongorana ny faritra ao an-trano na amin'ny toerana mitovy aminy. Ny FDA dia manome valiny amin'ny fanontanian'ny mpanjifa momba ny ...
Tombontsoa 6 amin'ny fampiasana ny hazavana UV ho an'ny famonoana otrikaretina
Ny fomba famonoana otrikaretina nentim-paharazana dia efa nampiasaina efa an-jato taonany maro - saingy ampy ve izany? Ny marina dia na ny fanadiovana henjana indrindra amin'ny rano mafana, ny «bleach» ary ny otrikaina dia mety tsy hahatratra ny mikraoba sy bakteria manimba. Amin'ny tranga ratsy indrindra, ireo zavatra ireo dia mety miteraka aretina na fahafatesana mihitsy aza. ...
Ny bakteria sy ny viriosy ary ny hazavana UVC dia mety hahafaty azy ireo?
Inona avy ireo bakteria sy viriosy? Ny bakteria sy ny viriosy dia afaka mivezivezy amin'ny rivotra, miteraka aretina mihombo. Mora miditra amin'ny rivotra izy ireo. Rehefa mievina na mikohaka ny olona iray, dia miparitaka eny amin'ny rivotra ny rano kely na vongan-tsiranoka moka feno viriosy na bakteria na miafara amin'ny tanana izay iparitahany ...
Kalitao aloha, fahamendrehana aloha
Room 102, Quanshan Mining Science Park, tanànan'ny Xuzhou, faritanin'i Jiangsu, Sina 221000